Pep Guardiola Oo Ka Hadlay Sababtii Uu Maurizio Sarri Salaanta Uga Qaadi Waayey Iyo Macallinka Chelsea Oo Dhinaciisa Sharraxaad Ka Bixiyey - Gool24.Net
Pep Guardiola Oo Ka Hadlay Sababtii Uu Maurizio Sarri Salaanta Uga Qaadi Waayey Iyo Macallinka Chelsea Oo Dhinaciisa Sharraxaad Ka Bixiyey
Tababaraha Manchester City, Pep Guardiola ayaa ka hadlay sababtii uu tababare Maurizio Sarri uga qaadi waayey salaanta kaddib dhamaadka ciyaartii shalay ee Man City ay 6-0 ku xasuuqday Chelsea.
Sarri ayaa markii ay ciyaartu dhamaatay iska indho tiray inuu salaanta ka qaado Pep Guardiola oo isaga oo gacanta fididinaya sii daba-dhaqaaqay, hase yeeshee Zola ayaa si diirran u salaamay oo u galay booskii Sarri.
Tababaraha Chelsea ayaa niyad-jab ka qaaday guul-darrada taariikhiga ah ee kooxdiisa kasoo gaadhay Man City, taas oo sabab u noqotay inay u degaan kaalinta lixaad ee liiska kala sarraynta kooxaha horyaalka Premier League.
Haddaba, tababare Pep Guardiola oo dhamaadkii ciyaarta la weydiiyey sababtii uu tababaraha Chelsea u salaami waayey, ayaa waxa uu tilmaamay inay leeyihiin xidhiidh fiican, dhacdanna uu u malaynayo inay ku timid Sarri oo aan isaga arkaynin.
“Waxaan la hadlay Gianfranco Zola. Isaguna imuu arkaynin. Xidhiidh fiican ayaan la leeyahay, wax dhibaato ahna ma jirto.” Sidaas ayuu yidhi Pep Guardiola.
Dhinaca kale, tababaraha Chelsea, Maurizio Sarri ayaa ka hadlay sababtii uu u raaci waayey sharciga dhaqan-wanaagga ah ee horyaallada oo uu u salaami waayey Pep Guardiola dhamaadkii ciyaarta, xilli uu macallinka City usoo dhaqaaqay dhinciisa, waxaanu yidhi: “Maan arkaynin waqtigaas, laakiin mar dambe ayaan u tegi doonaa oo aan soo salaami doonaa, sida caadiga ah. Waxaan doonayey inaan tago qolka lebbiska, waqtigaana isaga maan arkaynin. Ma jirto wax dhibaato ah oo naga dhaxaysaa.”
Si kastaba ha ahaatee, Man City ayaa ay guushani kusoo celisay hoggaanka Premier League oo ay farqiga goolasha kaga sare martay Liverpool.
BEENTII MA AHA OO WAX XUMAAN AH KAMA DHAXAYSO
WA XOGAA WAREER DHANKA IS MAQAL LA’AAN KA TIMID CIYAARYAHHANADA XILLIGII CIYAARTU SOCOTAY AYUU KU MASHQUULSANAA DUQU.